BBC Somali - Warar - Markab ay Puntland qabatay
Markab ay Puntland qabatay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 18 Novermber, 2012, 14:24 GMT 17:24 SGA
Xeebta Soomaaliya ayaan lahayn ilaalo tan iyo intii ay burburtay dowladda Soomaaliya.
Masuuliyiinta maamulka Puntland ayaa sheegay inay qabteen markab laga leeyahay Kuuriyada Waqooyi oo ku daadinaya sun shamiito iyo waxyaabo kale badda.
Maamulka Puntland wuxuu sheegay, inay ka qabteen markabka iyo shaqaalihiisa saarnaa oo kabadan soddon nin meel u dhow magaalada Boosaaso.
Dowladda Puntland ayaa sheegtay inay maxkamad saarayso shaqaalaha markabka. Ilaa hadda wax war ah lagama haayo Kuuriyada Waqooyi. Sunta iyo waxyaabo kale oo qashin ah ayaa dhowr jeer lagu soo waramay in lagu daadiyay badda Soomaaliya oo aan lahayn ciidan ilaaliya in kabadan labaatan sano.